May 2012 ~ Rohingya Blogger
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်အဖွဲ့ IA က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ချီးမြှင့်ထား သည့် ဆုကို ကမ္ဘာကျော် ရော့ခ် အဆိုတော် ဘိုနို Bono က အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ဒပ်ဗလင်မြို့တွင် အပ်နှင်းပေး မည် ဖြစ် သည်။
IA ၏ အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုမှုတရပ်ဖြစ်သည့် Ambassador of Conscience ဆုကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ချီးမြှင့်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ဇွန် ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဒပ်ဗလင်မြို့သို့ ဆိုက်ရောက်လာသည့်အခါ ကိုယ်တိုင် လက်ခံရယူမည် ဖြစ်သည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျက်သရေနဲ့ သတ္တိဟာဖြင့် အခြေမခိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဒီမိုကရေစီဆီ တိမ်းညွှတ်သွားစေနိုင်ပါတယ်” ဟု U2 အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ဘိုနို က ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဥရောပခရီးစဉ်များအဖြစ် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အော်စလိုမြို့တွင် ကမ္ဘာ့နိုဘယ်ငြိမ်း ချမ်းရေးဆုကို လက်ခံရယူပြီးနောက် ဒပ်ဗလင်သို့ သွားရောက်ကာ IA ဆုကို လက်ခံရယူမည် ဖြစ်သည်။
Ad Hoc Commission on Depayin Massacre (Burma)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့ကြသည့် လက်နက်ကိုင်လူတစုကို ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု မဖြစ်ပွားမီ ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ကျည်တောက်ပေါက် ကျေးရွာအနီးတွင် ၂၀ဝ၃ ခုနှစ် မေလ ၂၅ ရက်နေ့က တွေ့မြင်ရသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။(Photo: Ad Hoc Commission on Depayin Massacre- Burma)
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိလာမှာ ဖြစ်သလို တစ်ချိန်တည်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း စီးပွားရေး တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားသွားပါတယ်။RFA Read More
DUBLIN (AP) — Bono will present Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi with Amnesty International's highest honor when she visits Dublin next month as part of her first international tour in 24 years, the U2 singer and other organizers of an Irish tribute concert announced Wednesday. Suu Kyi is scheduled to visit Dublin on June 18,aday after collecting her Nobel Peace Prize in Oslo, Norway. Suu Kyi was awarded the Nobel in 1991, and Amnesty's Ambassador of Conscience award in 2009. She was unable to claim either award in person until now because she was under house arrest for 15 of the past 24 years and, even when free, afraid to leave Myanmar in case the country's military junta barred her return. Bono devotedaseries of U2's 2009 concerts to Suu Kyi, demanding her release from house arrest, and unveiled the Amnesty award at one Dublin concert that year. He said the June 18 event would be the first time he's ever met the 66-year-old pro-democracy activist. "It's so rare to see grace trump military might, and when it happens we should make the most joyful noise we can," Bono said inaprepared statement. "Aung San Suu Kyi's grace and courage have tiltedawobbly world further in the direction of democracy. We all feel we know her, but it will be suchathrill to meet her in person." Suu Kyi was elected to Parliament in Myanmar, also known as Burma, last month; took her seat May 2; and launched an international tour Tuesday starting in neighboring Thailand. She's also scheduled to address both houses of the British Parliament during her European tour next month. She is expected to visit Dublin solely to be guest of honor at the concert, called Electric Burma. Bill Shipsey, an Amnesty official organizing the concert, said others taking part would be actress Vanessa Redgrave, the Riverdance troupe, and folk-rock singer Damien Rice. Bob Geldof, like Bono an Irish rocker-turned-humanitarian, also will be involved in the concert. Geldof praised Suu Kyi asa"heroine of dignity, integrity, courage and steely moral vigor (who) lost her freedom and her family in order to gainanation. Ireland is ennobled by her visit." Sources: Read More
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေသော မြန်မာအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ် အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်ပါတီခေါင်းဆောင် မစ္စတာ အဘီဆစ် ဝေချာချိဝ တို့ ၂ ဦးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တည်းခိုရာ ရှန်ဂရီလာ ဟော်တယ်တွင် ယနေ့ မေလ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက တွေ့ဆုံကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မနက်ပိုင်းကလည်း မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအများစုရှိတဲ့ မဟာချိုင်ဒေ သ ကို သွား ရောက် ပြီး မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အားပေးစကား များပြောကြား ခဲ့ပါသေးတယ်။
ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ် မော်ကွန်းထိန်းက သူတို့ထံ သမ္မတ၏ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ရှိ တာကို အကြောင်းကြားလာတာလို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုက​ရေစီ​ခေါင်း​ဆောင် ဒေါ်​အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုင်းနိုင်ငံစမွတ်စခွန်ခရိုင်မဟာချိုင်​ဒေသက မြန်မာ အလုပ်သမား​တွေ ထောင်နဲ့​ချီပြီး​ကြိုဆိုခဲ့​ကြပါတယ်။ ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ဟာ ကမ္ဘာ့​စီး​ပွား​ရေး​ဖိုရမ်တက်​ရောက်ဖို့​မ​နေ့​ည ထိုင်း​စံ​တော် ၉ နာရီခွဲမှာ ထိုင်း​နိုင်ငံ ဘန်​ကောက်မြို့​ကို ရောက်ရှိပြီး​နောက် ဒီ​နေ့​မနက်ပိုင်း​မဟာချိုင် သွား​ရောက်ပြီး​မြန်မာအလုပ်သမား​တွေကို မိန့်​ခွန်း​ပြောကြား​ခဲ့​ပါတယ်။ ရုပ်/သံဖိုင်မှာ နား​ဆင်နိုင်ပါတယ်။
မူလတန်း အခမဲ့ဆိုသော်လည်း ရန်ကုန်ကျောင်းတချို့ ငွေတောင်းခံနေဆဲ
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းသားများ အနေဖြင့် အခမဲ့ ပညာရေး သင်ယူခွင့်ရမည်ဟု နိုင်ငံတော်အစိုးရက ကြေညာထားသော်လည်းရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ကျောင်းတချို့တွင် ငွေကြေးကို အလှူငွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ ကောက်ခံမှုများ ရှိနေသေးကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ကရင်ပြည်နယ် ကျေးရွာတရွာမှမူလတန်းကျောင်းသားများ(ဓာတ်ပုံ-KIC)ယခု ကျောင်းအပ်ရာသီ၌ ရန်ကုန်မြို့တွင်း မြို့နယ်တချို့မှ ကျောင်းများတွင်မူလတန်း ကျောင်းသားတဦးလျှင် အနည်းဆုံးအလှူငွေ၁၀၀၀ကျပ်၊အလယ်တန်း ကျောင်းသားတဦးလျှင်၂၅၀၀ကျပ်နှင့်အထက်တန်းကျောင်းသား တဦးလျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်ခန့် ပေးဆောင်နေရကြောင်း မိဘများကဆိုသည်။“ကျမကလေးက မူလတန်းဆိုတော့ အခမဲ့ပညာရေးလို့ သိထားတာ။ တကျပ်မှ ပေးစရာမလို ဘူးလို့ ကြေညာ ထားပေမယ့်အလှူငွေဆိုပြီး တောင်းတယ်။ဗလာစာအုပ်၆အုပ်ပဲရတယ်။ ခါတိုင်းနှစ်တွေ ထက်စာ ရင်တော့ တော်ပါသေးတယ်။ ခဲတံနဲ့ဖတ်စာအုပ်ကိုတော့ အပြင်မှာ ၀ယ်ရတယ်” ဟု တောင် ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းသား မိဘတဦးကဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။မူလတန်းများအားအတန်းတင်စာမေးပွဲ တနှစ်လုံးအတွက်ကျပ်၁၀၀၀သာ ကောက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း၊သို့သော်အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်း ကျောင်း သားများအတွက်ယခုကောက်ခံသော ငွေသည်အသေမဟုတ်သေးကြောင်း၊လိုအပ်ပါကထပ်မံကောက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျောင်းအပ်သည့် နေ့တွင် ဆရာ/ ဆရာမများက ပြောထားသည်ဟု ရန်ကုန် သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်နေ မိဘများက ဆိုသည်။“မူလတန်းကလေးတွေကို ထပ်မကောက်တော့ဘူးသာ ပြောတာ၊ ဒါပေမယ့် လလယ်လည်း ရောက်ရော ဘာတွေထပ်ပြီး ကောက်ဦးမှာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားရင်း လန့်နေတယ်” ဟု ကျောင်းသား မိဘတဦးက ပြောသည်။နိုင်ငံတော် အစိုးရက မူလတန်းပညာရေးကို အခမဲ့သင်ယူနိုင်ရန် ကြေညာထားသကဲ့သို့ ချို့တဲ့ ပညာသင် စရိတ်အဖြစ် မူလတန်းကျောင်းသား တဦးလျှင် တလ ၅၀၀၀ ကျပ်၊ အလယ်တန်းတဦးလျှင် တလ ၆၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက်တန်း တဦးလျှင် တလ ၈၀၀၀ ကျပ် ပေးအပ်သွားမည်ဟုလည်း ပြောဆိုထားသည်။အလယ်တန်း ပညာသင်ဆုများကိုလည်း မြို့နယ်တမြို့နယ်လျှင် တဦးနှုန်းဖြင့် အစိုးရက ထောက်ပံ့သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလယ်တန်း ပညာသင်ဆုကို မူလတန်း စာမေးပွဲအပြီးတွင် နောက်ထပ်စာမေးပွဲ တခု ထပ်မံ ဖြေဆိုစေကာ ထူးချွန် ကျောင်းသားတဦးလျှင် တလ ကျပ် ၁၀၀၀၀ ထောက်ပံ့သွားမည်ဟု ရန်ကုန် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ် ပညာရေးမှူးကပြောကြားကြောင်း မိဘများထံမှ သိရသည်။“ချို့ တဲ့ပညာသင် စရိတ်ကတော့ လျှောက်တဲ့ဦးရေ နည်းမယ်လို့ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ တော်တော်လေး အလုပ် ရှုပ်တယ်။ ချို့တဲ့တဲ့သူ တော်တော်များများက ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းတွေကို အဓိက သွားကြတယ်။ အဲဒီမှာက ဘာမှ မရှုပ်ဘူးလေ’’ ဟု ရန်ကုန် လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းနေ ကျောင်းသားမိဘ တဦးက ဆိုသည်။ရန်ကုန်မြို့ရှိ နာမည်ကျော် ဒဂုံ အထက ၁ ကျောင်းတွင်မူ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများသည် ကျောင်းသား တဦးလျှင် အလှူငွေ သိန်းချီ၍ ကောက်ခံနေသေးကြောင်း ဒေသခံ မိဘများထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်ရှိ ကျောင်းသားမိဘ တဦးကလည်း “ပိုက်ဆံတော့ ပေါ်တင် မတောင်းတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခန်းကောင်းကောင်းမှာ နေချင်ရင် ပိုက်ဆံပိုပေးကြ ဆိုပြီး တောင်းတာ ရှိတယ်။ တချို့မိဘတွေကျတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက မတောင်းရသေးဘူး ကိုယ့်ကလေး နေရာကောင်းကောင်းရဖို့ ဆိုပြီး ကန်တော့တာတို့၊ အတင်းပေးတာတို့ လုပ်ကြတယ်” ဟု ပြောသည်။ပညာရေး ဝန်ထမ်းများ၏ လစာငွေမှာ အသုံးစရိတ်နှင့် ကာမိခြင်း မရှိသောကြောင့် ယခုကဲ့ သို့သော ကျောင်းဖွင့်ရာသီတွင် ကျောင်းသား မိဘများထံမှ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ငွေကြေးတောင်းခံခြင်း၊ အိမ်တွင်အခကြေးငွေယူ၍အတန်းသားများအားကျူရှင် ပြရခြင်းတို ပြုလုပ်နေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျောင်းသား မိဘများက ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ယခင်နှစ်များက ပညာရေး အသုံးစရိတ်ကို အစိုးရ ဘက်ဂျက်၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ အသုံးပြုခဲ့ သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ၄ ဒဿမ ၇၁၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်သုံးစွဲသွားမည်ဟု သိရသည်။
ဧရာဝတီ Read More
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီမနက် ထိုင်းစံတော်ချိန် ၉း၄၅ မီနစ် တွင် မြန်မာအလုပ်သမား အများအပြား ရှိနေတဲ့ ဘန်ကောက်မြို့ အနီးကမဟာချိုင် ပုဇွန်ဈေးကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ပါတယ်။ဈေးမှ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားများရဲ့ ကြိုဆို မှုများကတော့ တကယ်ကို ၀မ်းသာစရာမြင်ကွင်းလေးပါဘဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေလို ဟစ်အော်ကြွေးကြော်၍ ဓာတ်ပုံများ ကိုင်ဆောင်ပြီ ကြိုဆိုနေကြတာ ကိုလဲ တွေမြင် ၇ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုဇွန်းဈေးက အဆောက်အဦး တစ်ခုကနေ မိန့်ခွန်းပြောဆိုပါတယ်။ ကြိုဆိုသူ တွေများပြားတဲ့အတွက် လုံခြုံရေးကလဲ အထူးယူထား တာကို လည်း မြင်နေရ ပါတယ် Prachatai - facebook)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မနက်ဖြန် အစီအစဉ်များ
မနက် ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် တည်းခိုရာ ရှန်ဂရီလာ ဟော်တယ် က မဟာချိုင်သို့ ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကွန့်ဂ် ( ပုဇွန်ဈေး) ကို မနက် ၉ နာရီမှာ ရောက်ပါမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ သူ့ ကားပေါ်ကပဲ ဈေးနဲ့ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရနေရတဲ့ဘ၀ အခြေအနေတွေကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်သံပေါ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မနက် ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှာ မဟာချိုင်မှာ ရှိတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အဖွဲ့အစည်းကြီး တခုဖြစ်တဲ့ MWRN ရုံးကို ရောက်ပါမယ်။ အဆိုပါ အဆောက်အဦး အပေါ်ထပ် လေသာဆောင်ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုကို မိန့်ခွန်းပြောကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနက် ၁၁ နာရီမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အဆိုပါ အလုပ်သမားအရေး ကူညီလှုပ်ရှားနေတဲ့ MWRN အဆောက်အဦးကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လေဆိပ်က တည်းခိုမည့် ရှန်ဂရီလာဟော်တယ်သို့ အသွား
Photo : Nay Linn
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာလာပြီ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ရဲ့ ၂၄ နှစ်တာအတွင်း ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ်အတွက် ရန်ကုန် လေဆိပ်ကနေ ထွက်ခွာရန် အချိန် တွေ့မြင်ရမည့် မြင်ကွင်း တချို့ပါ။
ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေ မြန်မာစံတော်ချိန် ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်က ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း တခုဖြစ်တဲ့ TG-306 နဲ့ ထွက်ခွာသွား ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ရှိ သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ လေဆိပ်သို့ ည ၉ နာရီမှာ ရောက်ရှိ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေဆိပ်နားနေဆောင်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မထွက်မီ ၊ ဓာတ်ပုံများ- Yangon Media Group
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်အဖွဲ့သည် အခြား ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖိုရမ်တက်ရောက်မယ့် ဧည့်သည်တော်များ တည်းခိုရာ ဘန်ကောက်ရှိ Shangrila Hotel မှာ တည်းခိုမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မနက်ဖြန် မနက် ၉ နာရီက ၁၀ နာရီအထိ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက စမွတ် စခွန်ခရိုင် မဟာချိုင် မြို့က မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေကို ဒေသမှာ ရှိတဲ့ အလုပ်သမား သမဂ္ဂရုံးအပေါ်ထပ်ကနေ မိန့်ခွန်း ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၌ တရားဝင် နေထိုင် လုပ်ကိုင် ခွင့် အလုပ်သမား လက်မှတ် ပြုလုပ်ပေးမှု အခြေအနေများကို လည်း လေ့လာရန် ရှိကြောင်း၊ မြန်မာ အလုပ်သမားများနှင့် မိသားစုဝင် များကိုလည်း တွေ့ဆုံ စကားပြောရန် ရှိကြောင်း အလုပ်သမားအရေး ကူညီနေသူ တဦးက ပြောသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မေလ ၃၀ ရက် ဘန်ကောက်မြို့၌ စတင်ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖိုရမ်သို့ တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောရန်ရှိပြီး ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့လည်း သွားရောက် လေ့လာရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Shwe Myitmakha Media Group , 29May 2012 —- မနေ့တုန်းက ကျမတို့ မြစ်မခရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်သတင်းထောက်ဆီက ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်း၊ ဖားကန့်ထိ ဖြစ်လာနေကြောင်း၊ ကချင်ပြည်သူ ဒုက္ခသည်တွေကလည်း တနေ့ထက်တနေ့ပိုများလာကြောင်း၊ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာလည်း လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေကြောင်း သတင်းတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် တက်လာခဲ့ပါတယ်။ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကျမရဲ့မောင်လေး အေးချမ်းဟိန်ကတော့ မျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ပဲ အဲဒီသတင်းတွေကို တည်းဖြတ်ပြီး သတင်းတင်တယ်။ ကျမကတော့ သတင်းတွေကို ဖတ်ပြီး စိတ်ထိခိုက်ခြင်းနဲ့အတူ မကျေနပ်ခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်း စတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ရင်ထဲမှာ တနင့်တပိုးကြီး ခံစားနေရပါတယ်။ မကျေနပ်ခြင်းတွေနဲ့ တနေကုန် ရင်ပြည့်နေတယ်။ ရပ်တန့်သင့်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲတွေ ဘာကြောင့်မရပ်တန့်ရပါသလဲ။ ဘာကြောင့်ခုချိန်ထိ မရပ်တန့်ရပါသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်ကတည်းက ကျမတွေးခဲ့မိတယ်။ ကျမ စိတ်ထဲ စဉ်းစားတိုင်း ရင်ထဲမှာ ခံစားရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကချင်ဒုက္ခသည် စခန်းက ကလေးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဟာ၊ အမျိုးသမီးကြီးငယ်တွေနဲ့ အခြေအနေမဲ့ကုန်တဲ့ ဘ၀တွေ….ဒီလိုသာဆိုရင် ကချင်တမျိုးသားလုံး ပျောက်ရချည်ရဲ့လို့လဲ တွေးမိပါတယ်။ ဒုက္ခသည် စခန်းရောက်နေတဲ့ ကချင်ပြည်သူတွေရဲ့ ထူထောင်ရေးကာလဟာ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ၊ သေချာတာကတော့ ၄ နှစ် ၅ နှစ်နဲ့ သူတို့ ဘ၀တွေ နလံမထူတော့တာပါပဲ။ ကချင်အမျိုးသားတွေ ကချင်လူငယ်တွေ ပညာသင်ဖို့ နောက်ကျပြီ၊ ခုလို တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သောကတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဆိုတာကလည်း …။ ဒီလို ဘ၀တွေ မြင်နေရတော့ တိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ကြသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ပေါ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ်ထိုးပွဲတွေရှိပေမဲ့ ဘာကြောင့် မရပ်တန့်ကြသေးသလဲ။ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ ကျမသူငယ်ချင်း ကချင်တိုင်းရင်းသူ တဦးက ပြောတယ်။ စီးပွားဖြစ် တိုက်ပွဲဆိုတာ ကြားဖူးသလားတဲ့။ ဟင့်အင်း ကျမ မကြားဘူးပါဘူးဆိုတော့ သူမက ဆက်ပြောပါတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် စီးပွားဖြစ်တယ်တဲ့…။ တိုက်ပွဲတွေက business လုပ်တာပဲ။ တိုက်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာဘယ်လောက်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံရတယ်တဲ့…။ အဲဒီစကားကြားရတော့ ကျမ ရှော့ဖြစ်သွားတယ်၊ အသက်တွေနဲ့ ရင်းပြီးတော့တောင် စီးပွားလုပ်ကြသတဲ့လား။ တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် တိုက်နေတဲ့ သူတွေရဲ့ အသက်တွေ ပေးကြရတယ်၊ ပြီးတော့ ဒေသခံတွေရဲ့ အသက်နဲ့ ဘ၀တွေ ပေးကြရတယ်။ အဲဒါကို စီးပွားလုပ်ကြသတဲ့လား။ အဲဒါကြောင့် တိုက်ပွဲတွေ မရပ်နိုင်သေးတာလား၊ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး မရလေ စီးပွားလုပ်လို့ ကောင်းလေသတဲ့လား။ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရေးဟာ နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်ကြာခဲ့တာလဲ လို့ ပြောရင် နိုင်ငံရေးကို စီးပွားဖြစ်လုပ်နေကြလို့လို့ ပြောနေကြတဲ့ သူတွေ ရှိတယ်။ ကျမတို့ ဘန်ကောက်ရောက်တဲ့အခါ၊ အမေရိကား ရောက်တဲ့အခါ ဒီလို စီးပွားဖြစ်ကိစ္စတွေကို ကြားရ သိရတော့ ရင်နာမိတယ်။ မြန်မာပြည်က ဆင်းရဲနွမ်းပါးလှတဲ့ပြည်သူတွေကို ပြေးမြင်ပြီး ခံစားရတယ်။ ငါတို့ဘ၀တွေနဲ့ ရင်းပြီး စီးပွားလုပ်ရက်လေခြင်းဆိုပြီး နာကျင်ခံစားရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တိုင်းရင်းသားရေး စတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေတပ်ပြီး ဒေါ်လာသောင်းနဲ့ချီပြီးလုပ်နေကြတဲ့ ပရော့ဂျက်တွေအကြောင်း မကြားချင်တော့ဘူး။ မခံစားနိုင်လွန်းလို့ပါရှင်။ အခု ကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေ ရပ်တန့်ဖို့ ဆိုတာ အစိုးရကိုတင် ကျမတို့ တောင်းဆိုနေလို့မရတော့ဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ သူတွေနဲ့ တောင်းဆိုဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်တွင်းက ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တောင်းဆိုကြတာကို ကျမ အားမရမိပါဘူး။ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထိထိရောက်ရောက် မတောင်းဆိုကြတာလဲ။ ကချင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲတွေ လုံးဝ ရပ်တန့်သွားအောင် တော်ဝင်နှင်းဆီမှာ ပွဲတွေ အခမ်းအနားတွေလုပ်ပြီး တောင်းဆိုနေတာက ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးရုံက လွဲပြီး အကျိုးမရှိလှဘူးလို့မြင်မိတယ်။ ပွဲလုပ်ဖို့ ကုန်ကျတဲ့ စရိတ်တွေ ပွဲလုပ်ဖို့ ပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ကချင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်စခန်းကို လှူလိုက်တာကပိုပြီး အကျိုးရှိမယ်လို့လည်း ထင်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုကုန်ကျစရိတ်တွေကုန်နေမဲ့အစား ဒုက္ခသည်တွေ သောက်ရေမလုံလောက်ဘူး ရေသန့်ဗူးတွေဝယ်လှူဒါကမှ သူတို့အသက်တွေ ဆက်ပေးရာ ရောက်ပါသေးတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ တရုတ်ပြည်ကလည်း မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းလေ သူတို့အတွက် အခြေအနေ မကောင်းလေဆိုတာကို နားလည်ထားတော့ တိုက်ပွဲတွေကို အားပေးနေပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ တရုတ်အစိုးရက လက်နက်ကြီးသေးသာမက၊ စစ်ပညာနဲ့ နည်းဗျူဟာအဆုံး ပံ့ပိုးပေးနေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ကျမတို့ ကြားနေရတယ်။ တရုတ်ပြည်က ကချင်ပြည်နယ်ကို မျက်စိကျနေတဲ့အတွက် တရုတ်ပြည်ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာကိုလည်း ကျမတို့ သတိပြုရပါမယ်။ ကျမတို့ တွေ တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်း(တိုင်းရင်းသားထဲမှာ ဗမာတွေလည်းပါပါတယ်) ရန်မဖြစ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရေးအတွက် ကျမတို့အားလုံးညီညွှတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ကျမတို့ ဘေးမှာ ၀ိုင်းနေတဲ့ ရန်သူတွေက နိုင်ငံကြီးတွေပါ။ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရေးဟာ တရုတ်ပြည်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာကို ကျမတို့ နားလည်ကြဖို့ လိုပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံက အန္တရာယ်တွေ မလာမီ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းသတိပြုရမဲ့ အရေးပါ။ ကချင်ပြည်နယ် အမြန်ဆုံ ငြိမ်းချမ်းဖို့က အရေးကြီးနေပါတယ်။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ကချင်ပြည်နယ်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တောင်းဆိုကြရအောင်ပါရှင်။ ကျမ ဒီလို ရေးခြင်းကို မကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကျမတို့အားလုံး ညီညွှတ်ကြဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ မမေ့ကြစေချင်ပါဘူး။ ကျမ အလိုလားဆုံးကတော့ ကချင်တိုက်ပွဲတွေ ရပ်တန့်ပြီး အမြန်ဆုံး တတိုင်းပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းဖို့ပါပဲ။ မိတ်ဆွေများကို ချစ်ခင်လေးစားလျက်ပါ။ May Thingyan Hein Read More